Halatra herin-jiro : maro ny fitaovan’ny Jirama simba | NewsMada
Halatra herin-jiro : maro ny fitaovan’ny Jirama simba
Tapaka ny famatsiana herinaratra eny amin’ny amin’ny manodidina an’i Bemasoandro Itaosy Ambonisoa, nanomboka ny asabotsy 7 oktobra teo. Raha ny fanazavana avy any amin’ny Jirama, be loatra ny fampiasana herinaratry ny mpanjifa, ka tsy mahazaka intsony ny fitaovana “transformateur” mandrindra ny famatsiana herin-jiro. Fantatra fa be loatra ny asa fanarenana tsy maintsy atao ka tsy vita omaly, alahady ary mitohy anio alatsinainy.
Araka ny efa notaterina teto, anisan’ny antony mahatonga ny fitaovana “transformateur” ho simba na may, ny hamaroan’ny mpampiasa herinaratra mihoatra araka ny tokony ho izy satria misy ireo misintona herin-jiro ivelan’ny kaontera.
Tsy eny amin’iny faritr’Itaosy iny ihany fa saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara mihitsy. Raha ny eto an-dRenivohitra, anisan’ny efa nahitan’ny Jirama fangalarana jiro toy izany ny eny 67 ha, Ambohimanarina, sns.
Mitaraina ny mpanjifa fa tsy tonga lafatra ny tolotra omen’ny Jirama, saingy maro koa ny Malagasy minia mangalatra, ary zary fanaon’ny maro ity fomba mamohehitra ity. Tsiahivina fa efa lasa raharaha ady heloka be vava ny fangalarana jiro na rano, ary voasazy fampidirana am-ponja sy fandoavana onitra.